Roku waa warbaahinta ciyaaryahan si weyn loo-aqbalay, oo aad isticmaali karto si ay u sii qulquli videos si toos ah aad TV badan oo doorashooyin channel. Laakiin miyaad taqaan in ay sidoo kale loo isticmaali karaa sida streamer ah in tuurtay video files deegaanka ee mobile inay ku riyoonayaa in aad guriga ku haysato. Xadka ugu weyn, si kastaba ha ahaatee, waa in kala duwan oo ay taageerayaan qaab u habkaani ma aha balaadhan oo ku filan. Taasi waa sababta aynu halkan u joognaa in ay bartaan sida loo sii qulquli qaab video ka mobile aad wax si Roku in habka ugu fudud.
Qeybta 1: Roku ay taageerayaan iyo aqlka qaabab Video
Qeybta 2: Sida loo sii qulquli Roku taageerayaan Videos iyo Audio
Qeybta 3: Sida loo sii qulquli Roku aqlka Videos iyo Audio
First, aan aragno waxa video iyo maqal ah qaabab run ahaantii noqon kartaa mid taageero Roku. Halkan waxaa ku qoran liis gaaban:
Format Video: MKV, MP4, MOV, wmv
Qaab Audio: AAC, MP3, WMA, FLAC, regelingen
Ma helay qaab ah in aad leedahay ugu ku hadalka taleefanka gacanta? Haddii aan, kuwa helaana waa in liiska dheer ee qaabka aqlka hoos ku qoran:
Format Video: 3GP, VOB, MTS, AVI, M4V, wmv, XviD, DV, MP4-XviD, DIVX, H.264, H.265 (HEVC), MP4-MC, OGV, ASF, MPEG-1 NTSC, MPEG -1 Pal, MPEG-1 SECAM, MPEG-2 NTSC, MPEG-2 Pal, MPEG-2 SECAM, DVD-Video NTSC, DVD-Video Pal, DVD-Video SECAM, FLV, F4V, Jabbuuti, 3GP, 3G2, iwm .
Qaab Audio: AC3, M4A, OGG, AIFF, AU, MKA, daanyeer, M4B, M4R, iwm
Haddii aad leedahay qaabab video in Roku taageertaa, hambalyaynayaa. Laakiin sug daqiiqad ah, kaliya waxaad iyaga saari karaa taleefanada in TV aad via Roku, inta aad leedahay aalad Apple la macruufka 4.3 ama ka dib, ama mid ka mid ah kuwan soo socda telefoonada Android ama kaniiniyo:
HTC Mid ka mid ah
Hadda, aad diyaar u tahay? Bal aynu eegno sida ay u tuurtay files deegaanka ee telefoonada in TV la hage tallaabo-tallaabo.
Fiiro gaar ah: In kastoo Roku ma taageeri qof dareen videos ka PC in TV rasmi ah, waxaad ka heli kartaa xal kale halkii.
Tallaabo 1: Ku rakib Roku app ee macruufka ama Android
Hel app Roku ee macruufka halkan iyo aad u hesho Android version halkan .
Talaabada 2: Isku shabakad isku
Iska aad telefoon ama kiniin ku xiran shabakada la mid ah sida aad Roku qalab, in uu yahay, wadadaas oo kale. Markaasay aad furto kartaa app Roku liiska qalabka Roku muuqday. Dooro mid ka mid ah qalabka iyo aad u hesho gacanta waxaa ka mid ah iyada oo aad telefoon ama kiniin. Ka hor inta in, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hesho login la xisaabtaada Roku.
Talaabada 3: Play on Roku
Haddaba tag si aad u ogaato Play ku Roku tab aad app ka dibna dooran video ah in aad rabto in aad soo tuurtay aad TV. Daqiiqo ka dib, waxaad noqon doontaa si aad u daawato videos shaashadda weyn aad TV ayaa awoodi.
Wixii qaabab si dabiici ah aqlka ee Roku, waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad inay idinka caawiyaan. Allcast waa in ay ahaataa mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican. Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa si aad u sii qulquli files mobile in TV dhex Roku, oo ay ku jiraan video, audio iyo xitaa sawirada. By habka, waxay bixisaa maxkamadda 5-daqiiqo oo aad u baahan tahay si ay u soo iibinno $4.99 in ay wakhtigan ku istareexa oo dhan warbaahinta aad.
Tallaabo 1: Ku rakib Allcast
Fadlan ka heli Allcast u Android halkan . Oo version macruufka rasmi ah la soo saari doonaa in habkaani ku dhow, iyadoo horay ayaa furtay baaritaan calaamad-up .
Talaabada 2: Isku in Roku
Hubi in aad telefoon iyo Roku ku xiran yihiin shabakad isku mid ah. Markaas furo Allcast oo si toos ah iskaan doonaa streamers laga heli karaa sida Roku, Chromecast, Apple TV ama Madaxweyne Siilaanyo. Waayo, hadda, fadlan dooro ciyaaryahanka geeyo Roku.
Talaabada 3: durduri file in Roku
Ka dib markii aad dooratay qalabka, Haddaba waad arki doontaa oo dhan files on Allcast, kaas oo uu ku sameeyey baaritaan buuxa oo telefoon. Tab sawir ama video iyo waxa la joogaa wakhtigii sixir. Waxaad arki doontaa wax sawir ama video on TV ee waqtiga dhabta ah.
Taasi waxa ay samaysay. Aad u anfacaya, miyaanay ahayn? Haddii kale, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Converter video ah in hore loogu badalo warbaahinta si aad u Roku taageeray qaabab sida MKV, MP4, MOV, wmv. Markaas qulquli files si ay TV la Roku. Tani waa meesha Wondershare Video Converter Ultimate yimaado, taas oo ah aalad awood iyo anfacaya si ay u gutaan shaqo this. Just ay tijaabiyaan. Oo waxaa ka badan inta aad ka filan sida, waa in TV qulquli karaan faylasha aad PC ee maxaliga ah sida ugu fudud ee Allcast in madal ay Android falaa. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Waxaa Download hoose oo waa in aad marnaba ka maqnaan.
Talooyin Dhibaatooyinka u Chromecast Common Arrimaha
Sida loo sameeyo Tutorial Videos
Sida loo dib u socon Videos in Windows iyo Mac
Sida loo yareeyo awoodda FLV
Sida loo jar / Split / goo MOV (QuickTime) Files
> Resource > Video > Sida loo il kasta Video iyo Qaabka Audio in Roku